Cadaqués | यात्रा समाचार
मरियम | | España, सप्ताहन्त
कलाकार साल्भाडोर डाले भन्ने गर्थे कि काडाकु संसारकै सबैभन्दा सुन्दर शहर हो। सायद त्यहाँ कोही व्यक्तिहरू छन् जसले यस भनाइलाई प्रश्न गर्छन् तर के अस्वीकार गर्न सकिँदैन त्यो हो क्याडाकोन क्याटालोनियामा सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक हो। यो क्याप डि क्रियस नेचुरल पार्क, Alt Empord Emp क्षेत्र मा अवस्थित छ।
यो पर्यटकको ब्युमबाट बच्‍यो र विशाल निर्माणलाई यसरी प्रतिरोध गर्‍यो कि यसले यसको मनमोहक र आरक्षित सार सुरक्षित गर्न सक्षम भयो। कारण हुन सक्छ किनकि त्यहाँ पुग्न अझै गाह्रो छ, यद्यपि एक पटक त्यहाँ पुगेपछि पनि अनुभव अविस्मरणीय छ। सत्य यो हो कि हामी Cadaqués भ्रमण गर्ने कारणहरूमा विस्तार गर्न सक्दछौं तर सबै भन्दा राम्रो कुरा यसलाई देखाउनु हो। तपाईं यसको भ्रमण गर्न प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनुहुने छैन!
1 Cadaqués कहाँ छ?
2 क्याडाकसमा के हेर्ने?
2.1 सान्ता मारियाको चर्च
2.2 पुरानो सहर
2.3 समुद्री तटहरू
2.4 क्याप डे क्रियस लाइटहाउस
Cadaqués कहाँ छ?
कोस्टा ब्रावाको पर्ल गेरोना प्रान्तमा अवस्थित छ। हामीले भनेझैं, यसमा पुग्न सजिलो कुरा छैन, विशेष गरी उनीहरूलाई जो गाडीमा यात्रा गर्दा चक्कर आउँछन् किनकि शहरमा पुग्न लगभग १ kilometers किलोमिटर टाढाको सडक छ। यहाँ एक पटक, यस ठाउँलाई चिन्ने सबै भन्दा राम्रो तरिका भनेको सान्ता मारियाको पारिस चर्चको माध्यमबाट मार्ग सुरू गर्नु हो।
क्याडाकसमा के हेर्ने?
सान्ता मारियाको चर्च
सान्ता मारियाको चर्चमा जाँदा, हामीलाई १ XNUMX औं शताब्दीको एउटा सुन्दर मन्दिर र भूमध्यसागरको किनारमा रहेको शहरको अद्भुत दृश्यहरू देख्न मिल्छ जुन सानो डु little्गा समुद्रमा तैरिरहेको छ।
पुरानो शहर क्याडाकसलाई चिन्ने उत्तम तरिका यसका ठाडो र साँघुरो सडकहरूमा हुँदै टहलिरहेको छ। यी समुद्री किनारमा संकलित ढु stones्गाले बनिएका थिए। ढोका, विन्डोज र कुर्सीहरू पोर्टलमा साथै घरको अनुहारमा झुण्डिएको लिलाक बोगेनभिलियाले सुन्दर तस्विर बनाउँदछ।
काडाकुमा भ्रमण गर्नका लागि सिफारिश गरिएको ठाउँहरू मध्ये एक समुद्र तट हो जहाँबाट तपाईं शहरको अर्को परिप्रेक्ष्य हुनुहुन्छ। त्यहाँ छनौट गर्न एउटा ठूलो भीड छ: साना, ठूला, बालुवा र ढु stone्गा ... तर ती सबैमा पानीको स्पष्टता र चट्टानहरूको बिचमा छालहरूको आवाजलाई ध्वनि ट्र्याकको रूपमा मिल्दछ।
Cadaqués मा जान्नका लागि केहि प्रस्तावहरू सा कोन्का हुन्, धेरै आरामदायक, बलुवा र शहर नजिकै। अर्को विचार भनेको Cala Cullaró मा जानुहोस् जुन दुई किलोमिटर टाढा पैदल दूरीमा अवस्थित छ र ठाउँको सुन्दर मध्ये एक हो। ढु Following्गाको साथ तट पछि त्यहाँ अविश्वसनीय दृश्यहरूका साथ लोभाहरू पनि छन्।
यसको कुनै एक कव्समा डुब्ने बित्तिकै, एउटा राम्रो योजना भनेको प्रोमेनेडको कुनै एउटा टेर्रेसमा पेय राख्नु हो, जहाँ तपाईं समुद्रको छेउमा आकर्षक ठाउँहरू भेट्टाउनुहुनेछ सुन्दर सूर्यास्तको आनन्द लिन।
क्याप डे क्रियस लाइटहाउस
क्याप डे क्रियस लाइटहाउस चिन्न सब भन्दा चाखलाग्दो तरीका पैदलमा छ किनकि परिदृश्य अद्भुत छ। जहाँसम्म, तपाईं कार, मोटरसाइकल वा बाइकबाट सवारी रोज्न पनि सक्नुहुन्छ। हिंडाई दिनभरि व्यतीत हुन्छ, विशेष गरी यदि कसैले काला जुगाडोरा वा गुइलोला, वा क्याप डि क्रियसमा नै प्रकृति देख्न छोड्नुभयो भने एक अद्वितीय जादू भएको प्राकृतिक पार्क।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » क्याडाक
ब्रेमेनमा के हेर्ने